अमेरिकन आइडलमा नेपालका दिवेशको कमाल, तीनैजना जजले उभिएर भने, ‘मोर माेर’ ( भिडियो हेर्नुस ) |
अमेरिकन आइडलमा नेपालका दिवेशको कमाल, तीनैजना जजले उभिएर भने, ‘मोर माेर’ ( भिडियो हेर्नुस )
२०७६, ५ चैत्र बुधबार ११:३९ March 18, 2020 ताजा खबरमनोरन्जन
एजेन्सी, ४ चत्रै । अमेरिकन आइडलको अडिसनबाट छानिएका नेपाली मूलका दिवेश पोखरेलले ‘हलिउड वीक’ काे पहिलाे दिनमा दिएको प्रस्तुतिले तीनैजना जज निकै प्रभावित भएका छन् । प्रस्तुतिका दिने क्रममा देवेशले ओटिस रेडिङ र द ब्ल्याक क्रोजको ‘हार्ड टु ह्यान्डल’ गीत गाएका थिए । दिवेशले ओटिस रेडिङको ‘हार्ड टु ह्यान्डल’ को दुई हरफले मात्रै निर्णायक मण्डललाई चित्त बुझेन ।
दिवेशले गाएको गीत सुनेर निर्णाय क्याटी पेरीले उठेर मोर भन्न थालिन्- ‘मोर…।’ जवाफमा दिवेशले ‘धन्यवाद’ फर्काए, तर पेरीले ‘मोर, मोर’ भन्न छोड्दिनन् । अन्य दुई जना निर्णायक जज रिची र ब्रायनले ‘मोर…’ भन्न थाले । निर्णायक मण्डलको चाहना अनुरुप फेरि आफ्नो प्रस्तुतीलाई निरन्तरता दिए ।
दिवेशले आफ्नो प्रस्तुती निरन्तरता दिँदा निर्णायक मण्डलमा रहेका तीनैजना जज उभिएर ताली बजाउँदै थिए । जज ल्यूक ब्रायनले त दिवेशसँगै गाए पनि । उनको प्रस्तुतीका बेला दर्शक निकै उत्साहित देखिन्थे, तालमा ताल मिलाएका थिए ।
दिवेशलाई साथ दिन त्यहाँ उनकी दिदी रूपा पोखरेल पनि पुगेकी थिइन् । आफ्नो प्रस्तुती अघि दिवेश अभिवादन स्वरुप ‘नमस्ते’ भने । रुपाले नमस्ते भनेर चिच्याउँदा तीनैजना निर्णायकले खुसी भएर उनलाई पुलुक्क हेरेका थिए । आफ्नो प्रस्तुतिबाट निर्णयकहरूको मन जित्न सकेकोमा दिवेशले खुशी भएको प्रतिक्रिया दिए ।
२०७६, २५ चैत्र मंगलवार १७:०८
को’रोनाका बि’रामी बचाउन मिस इंग्ल्यान्डको ताज छोडेर डाक्टर पेसामा फर्किन यी युबती !
२०७६, ६ चैत्र बिहीबार १५:०१
फिल्म बनाउँदै सङ्गीतकार टंक बुढाथोकी, अशोक दर्जी नायक
२०७६, ५ चैत्र बुधबार २१:१२
आँचल शर्मालाई पति उदिपले दिएको ब्यागको मुल्य दुई लाख नै हो ? वास्तविकता थाह पाउँदा चकित पर्नु हुनेछ